Ukubuyekezwa kwe-Delta Shower Faucet
Ikhaya / Blog / Ukubuyekezwa Kwamapayipi eDelta Shower: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga wama-Delta Shower ompompi
Ukubuyekezwa Kwamapayipi eDelta Shower: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga wama-Delta Shower ompompi
2021 / 02 / 04 UkwahlukanisaBlog Umhlahlandlela Wompompi 5133 0
Noma ngabe usuku lwakho lumatasatasa kangakanani, lunengcindezi noma lubi kangakanani, ungahlala uthembele eshaweni elihle ukuze uvuselele futhi uphumule. Vele, uhlelo lwakho lombhobho wokugeza lubamba iqhaza ekutheni igeza lakho liqabula kanjani.
Imikhiqizo esezingeni eliphakeme yeDelta idlulela ngaphesheya kompompi bamanzi bese iba yizinhlelo zokugeza ezigcwele, kusuka ezinqumweni ezilungele isabelomali kuye ekunethezekeni kwangempela. Bheka ukukhethwa kwethu okuphezulu kwezinhlelo ze-Delta's shaucet.
1. In2ition Ukusetha Okune-in-One Shower
Ukuze ube neshawa enkulu, kwesinye isikhathi udinga ukweqa ikhanda lekhanda le-single-angle elilodwa futhi ufinyelele ekusebenzeni okuhlukahlukene. Yilelo igama lomdlalo nge In2ition Ukusetha Okwesine Kwe-One-One Shower I-Chrome 75486C .
Okunamathiselwe kwe-hand spray spray
Izindlela ezine zokufafaza
Izimbobo zokufafaza ezithintwayo
Uhlelo lwe-In2ition shawa luthole indawo ephezulu ohlwini lwethu ngoba ngenkathi ligcwele izici, futhi luyi-shower system engabizi kakhulu ohlwini lwethu. Inani elifanele kunoma iyiphi indawo yokugezela.
Lolu hlelo lokugeza lunefomu elihlukile. Inenduku yokuhlikihla amanzi ephathekayo etholakalayo, kepha induku ihlala maphakathi nesihloko sokugeza somzimba esigcwele. Lokhu kukunikeza izindlela ezine zokufafaza ongakhetha kuzo: ukufafaza umzimba okugcwele, ukuphulula umzimba, ukumisa isikhashana, kanye nesifutho somzimba esigcwele kanye nesifutho ngesikhathi esisodwa.
2. I-Windemere Single-Function Shower Trim Kit
Isistimu yakho yokugeza yiyona eyenza ishawa yakho ikhululeke futhi iqabule. Kungani kungafanele kube yinto yokuhlobisa nayo? Leyo inqubo yokucabanga ngemuva kwe- I-Windemere Single-Function Shower Trim Kit I-Chrome BT14296 nokubukeka kwayo okumangalisayo.
IMultiChoice Universal Valve
Gada Ingcindezi-Balanced Valve
Izinketho eziningi zekithi
Isitayela sesitayela seshawa iWindemere singesinye sezici eziningi ezikhangayo lolu hlelo olunikezayo. Ukuqinisekisa ikhwalithi ethembekile yeDelta, lolu hlelo lokugeza lufaka ubuchwepheshe obuningi bokuphathelene neMultiChoice Universal Valve kanye ne-Monitor Pressure-Balanced Valve Coverage.
Isici esiyisihluthulelo sale khithi yi-H2Ubuchwepheshe be-Okinetic. Lokhu kungenye yezinto ezintsha zeDelta, ezenzelwe ukwenza kube sengathi ishawa yakho iletha amanzi amaningi kanti uhlelo longa amanzi.
IWindemere ayidumazi uma kukhulunywa ngokwezifiso, noma. Ungathenga ama-kits eshawa noma i-shawa ne-tub combo. Iphinde ifike ngezinketho ezintathu zokuqeda futhi ungayithenga noma ngaphandle kwesihluku.
3. I-Lahara 14-Series Shower-Handle Shower neTub Kit
Uma uphakathi kwabaninikhaya abangenakubalwa abaphethe ompompi bakaLahara kusinki yabo yokugezela, iyiphi indlela engcono yokugcwalisa labo ompompi kunesistimu yokugeza efanayo? IDelta iyayazi injabulo yendlu yangasese ehlelwe kahle futhi yenza kube lula nge- I-Lahara 14-Series Shower-Handle Shower neTub Kit Ithusi T14438-CZ .
Ilungiselelwe i-combo ne-shower combo
Izilungiselelo ezinhlanu zokufafaza
Lolu hlelo lokugeza aludumazi abalandeli beminye imikhiqizo yakwaDelta yeLahara. Ngaphezulu kokubukeka okudala, lolu hlelo lunezinhlobonhlobo zezinketho zokufafaza. Kubandakanya isifutho sakho esigcwele somzimba, isifutho sokuhlikihla, isifutho se-massage nesifutho somzimba esigcwele, isifutho sokuthambisa esimanzi, kanye nomsebenzi wokuphumula.
Isifutho samanzi esithambile siyisici esingajwayelekile. Kuyisifutho esifana nenkungu esikahle lapho ufuna ukukhanya okuqabulayo, okuqabulayo.
4.Lahara 14-Series Single-Handle Shower Faucet
Ufuna ukubukeka kukaLahara nezici ezinhle kepha ungenayo ibhavu eshaweni lakho? Unenhlanhla nge ILahara 14-Series Single-Handle Shower Faucet Ithusi T14238-CZ .
Lolu hlelo lokugeza lweLahara lunezici ezifanayo nezinzuzo ezifana neshawa neshubhu, kufaka phakathi imodi yokuphumula ethambile. Umehluko omkhulu ukuthi lolu hlelo alubandakanyi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu. Njengomphumela, kukonga kancane, futhi.
Ngazo zombili izinhlelo ze-Lahara 14-Series shawa, kubalulekile ukuqaphela ukuthi amakhithi awafaki i-valve, ngakho-ke qiniseka ukuthi uthenga i-valve oyidingayo ngaphambi kokuqala ukufakwa.
Cabanga ngeTrinsic njengokwakheka kweDelta okwenzelwe abaninikhaya abanokugqama kwesimanje. Njengepayipi likaTrinsic lokugezela, i- I-Trinsic 17-Series Dual-Function Shower Kit I-Champagne Bronze T17259-CZ inazo zonke izitayela zokusika ozifunayo.
Izinketho ezinhlanu zokuqeda
I-Trinsic ingenye yamamodeli aphezulu eDelta, futhi ikhithi yabo yokugeza ayihlukile. Yimodeli ebiza kakhulu ohlwini lwethu, kepha ngesizathu esihle.
Uhlelo lokugeza lweTrinsic lusebenzisa uH2I-Okinetic Technology, esebenzisa ukuhlelwa kwamagagasi ahlukile nosayizi wamaconsi ukwenza kuzwakale sengathi uthola amanzi amaningi kunalokho oyikho ngempela.
Esinye isici sokusetshenziswa okulula yiMonitor Pressure-Balanced Valve: enye yezinto ezintsha zikaDelta. I-valve igcina ingcindezi engaguquguquki kulawulo lokushisa ukuze ungatholi ukuvuka okungathandeki koshintsho lokushisa okungazelelwe.
Ukukhetha i-Delta Shower System yakho
Wonke umuntu unemibono yakhe ngalokho okwenza kube neshawa enhle, futhi iDelta iyakubona lokhu. Kungakho banezinketho eziningi kakhulu zamasethingi wesifutho nokulungiselelwa kwesistimu yokugeza ukuze ukwazi ukukhetha okulingana kangcono nezidingo zakho. Zonke izinketho ezikulolu hlu zingabanqobi abafanelekile.
TagUkubuyekezwa kwe-Delta Shower Faucetisitsha sokugeza	Edlule :: Ukubuyekezwa Kwetheyiphu Yekhishi LaseDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Ka-2021 Wompompi Bekhishi BaseDelta
Ukubuyekezwa Kwetheyiphu Yekhishi LaseDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Ka-2021 Wompompi Bekhishi BaseDelta
2021 / 02 / 03 5046
Ukubuyekezwa Kwompompi Wendlu yangasese ye-Delta: Umhlahlandlela Wokuthenga wama-2021 Wompompi Bokugeza be-Delta
2021 / 02 / 03 4287
Ungazihlanza Kanjani ompompi Abasekhishini Abamnyama
2021 / 01 / 28 3380
Ungayikhetha Kanjani ompompi Wokugeza: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga
2021 / 01 / 28 2225
Ungakuhlanza Kanjani Ukulungiswa kweMatte Black Bathroom
2021 / 01 / 28 3789
Uyini Qeda Odume Kakhulu Wompompi Bokugeza?
2021 / 01 / 27 2778